महिला र दलितप्रति दशैंको सन्देश
मानव विकास सँगसँगै हाम्रा चाडपर्व,रितिरिवाज,धर्म संस्कार पनि मानवको आवश्यकता अनुसार साथसाथै आएको हो । धर्म संस्कार मानिसले मात्रै मान्दछ । चलन चल्तीमा ल्याउने र विस्तारै संस्कारलाई अनुसरण...
मानव विकास सँगसँगै हाम्रा चाडपर्व,रितिरिवाज,धर्म संस्कार पनि मानवको आवश्यकता अनुसार साथसाथै आएको हो । धर्म संस्कार मानिसले मात्रै मान्दछ । चलन चल्तीमा ल्याउने र विस्तारै संस्कारलाई अनुसरण गर्ने काम मान्छेले मात्रै गर्दै आएको देखिन्छ । धर्म संस्कार मानवलाई मात्रै लागु भएको पाइन्छ । सबै प्रकारको सर्वाङगिर्ण विकास जस्तै हाँस्ने,रुने र सोच्ने शक्ति मान्छेले मात्रै पाएको हुन्छ । आपनो परंपरा अनुसार काजक्रिया गर्ने र दुखसुख व्यक्त गर्ने कार्य जनावरले गर्न सक्दैन । प्रत्य...
किन बढिरहेका छन् अपराधहरु ?
अपराध बिभिन्न किसिमका हुन्छन् । जस्तो बलात्कार, हत्या, चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार, देशद्रोह आदि । तर हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार र देशद्रोहलाई अपराध मानेको पाइँदैन । किनभने यहाँ प्रधानमन्त्री, मन्त...
अपराध बिभिन्न किसिमका हुन्छन् । जस्तो बलात्कार, हत्या, चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार, देशद्रोह आदि । तर हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार र देशद्रोहलाई अपराध मानेको पाइँदैन । किनभने यहाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र उच्चतहका कर्मचारीले बिगतमा र अहिले पनि गरिरहेका भ्रष्टाचारका नालीबेलीहरु भनिसाध्य र सुनिसाध्य छैन । तर, यिनीहरुलाई अपवादबाहेक कारवाही हुँदैन । किनभने छानबिन गर्ने र सजाय दिने जिम्मा पाउनेको पदमा यी नेताकै पकेटका मान्छेहरु भर्ती गरिएका छन् र उनीहरु पनि भ्रष्टाचारमा सहभ...
कार्यकर्ताको दुःख कसले बुझ्ने ?
संस्कृतमा एउटा श्लोक छ— नानाशास्त्र पठेन लोके नाना दैवतःपुजनम् । आत्मज...
संस्कृतमा एउटा श्लोक छ—
नानाशास्त्र पठेन लोके नाना दैवतःपुजनम् ।
आत्मज्ञान विनापार्थ सर्व कर्म निरर्थकम् ।।
यसको अर्थ हुन्छः मानिसहरु धर्म कमाउन भनि विभिन्नप्रकारका शास्त्रहरु वाचन गर्दछन्, अनेकौं प्रकारका देवी देवताहरुको पूजाअर्चना गर्दछन् तर जेसुकै र जतिसुकै धार्मि...
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीले उठाएको प्रश्न
भर्खरै ५ नं. प्रदेशको संसदले प्रदेशको नाम लुम्बिनी भनी नामाकरण गर्यो भने आसपासका जिल्ला अर्घाखा“ची र प्युठानका केही भुभागलाई समेट्ने गरी मुख्य रुपमा दांग जिल्लाको भालुवांगलाई राजधानी...
भर्खरै ५ नं. प्रदेशको संसदले प्रदेशको नाम लुम्बिनी भनी नामाकरण गर्यो भने आसपासका जिल्ला अर्घाखा“ची र प्युठानका केही भुभागलाई समेट्ने गरी मुख्य रुपमा दांग जिल्लाको भालुवांगलाई राजधानी भनी घोषणा गर्यो । यो एक ऐतिहासिक घटनासंगै यसले रुपन्देहीमा र विषेश गरी बुटवलमा राजनैतिक र वैचारिक रुपले ठूलो वहसको उठान गरेको छ । रुपन्देही भित्रमात्रै बहस सीमित नभएर यसले राष्ट्रव्यापी रुपमा एउटा ओजिलो बहसको विषय बनाइदिएको छ । रुपन्देहीमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले आयोजना गरेका अन...
जोगिएला देउखुरी ?
लामो समयदेखिको अन्यौलता र विवादपछि प्रदेश ५ ले नाम राजधानी पाएको छ । प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेश राजधानी अर्घाखाँचीको केहि भूभागसहित दाङ्गको देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी बनाउ...
लामो समयदेखिको अन्यौलता र विवादपछि प्रदेश ५ ले नाम राजधानी पाएको छ । प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेश राजधानी अर्घाखाँचीको केहि भूभागसहित दाङ्गको देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताब प्रदेशसभाले पास गरेको छ । प्रदेशको राजधानी दांग वा बुटवल भन्ने विवाद रहेकै बेलामा प्रदेशको भौगोलिक संरचनाअनुसार झन्डै बीच भागमा पर्ने देउखुरी उपत्यका अब प्रदेश राजधानी बनेको छ । प्रदेश सरकारले राप्तीनदि किनारका साबिकका लालमटिया, सिसहनिया, गोबरडिहा, गङ्गा परस्पुर र गढव...
देशलाई एमसीसी आवश्यक नै हो त ?
अहिले कोरोना महामारीले सन्सारलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ । सन्सारका सबै देशहरु अहिले आफ्ना जनतालाई कोरोनाबाट कसरी बचाउने र यसबिरुद्धको खोप छिट्टै कसरी तयार गर्न सकिन्छ भनि लागीपरेका छन् । तर,...
अहिले कोरोना महामारीले सन्सारलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ । सन्सारका सबै देशहरु अहिले आफ्ना जनतालाई कोरोनाबाट कसरी बचाउने र यसबिरुद्धको खोप छिट्टै कसरी तयार गर्न सकिन्छ भनि लागीपरेका छन् । तर, हाम्रो देशको सरकार यस महामारीबाट जनताको जिउज्यानको सुरक्षामा लागी पर्नुभन्दा अन्य कुराहरु जस्तोः मन्त्रीहरुको भागबण्डा, अन्य रिक्त पदहरुको भागबण्डा, सांसद बिकास कोषको बाँडफाँड आदि कुराहरुमा अल्मलिइरहेको देखिन्छ । अहिले देशमा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार छ ।
न्वारान भयो भातखुवाइ कहिले ?
धेरै लामो प्रतिक्षापछि प्रदेश ५ को न्वारान भयो । यसले स्थायी राजधानी भालुवाङ र प्रदेशको नाम लुम्बिनी पाएको छ । बुटवलमै राख्ने र देउखुरीको भालुवाङ राजधानी लैजाने कुरामा दलहरुबीच धेरै रस्साक...
धेरै लामो प्रतिक्षापछि प्रदेश ५ को न्वारान भयो । यसले स्थायी राजधानी भालुवाङ र प्रदेशको नाम लुम्बिनी पाएको छ । बुटवलमै राख्ने र देउखुरीको भालुवाङ राजधानी लैजाने कुरामा दलहरुबीच धेरै रस्साकस्सी भयो । यसले सडकमा टायर बाल्नेदेखि सर्वसाधारण नागरिकका सवारी साधनमा तोडफोड र आगजनी गर्ने काम गरायोे । प्रदेशसभा हलभित्र कुर्ची, माइक भाँच्नेसम्मका काम भए । त्यहाँ आन्दोलितहरुलाई घिसारेर बाहिर फाल भन्नेसम्मका बोली बोलियो । लोकतान्त्रिक ब्यवस्था भएका देशमा यी निन्दनीय कृयाकलाप भ...
इतिहास भन्छ– महाराजधिराजले ‘विकासको मूल फुटाउन’ देशलाई भौगोलिक र प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा विभाजन गरेका थिए । विकास क्षेत्रका नाममा । अञ्चल र जिल्लाका नाममा । नगर र गाउँ पञ्चायतका नाममा ।
इतिहास भन्छ– महाराजधिराजले ‘विकासको मूल फुटाउन’ देशलाई भौगोलिक र प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा विभाजन गरेका थिए ।
विकास क्षेत्रका नाममा । अञ्चल र जिल्लाका नाममा । नगर र गाउँ पञ्चायतका नाममा ।
त्यो विभाजनको पृष्ठभूमिमा विकेन्द्रीकरणको सिद्घान्त रहेको भनिए पनि सत्ता र शक्ति केवल काठमाण्डौमा नै थियो ।
सार्वभौमसत्ता नै महाराजधिराजमा थियो । महाराजधिराजको कृपाबिना विकेन्द्रीकरणको स्वाद चाख्न पाउँदैनथे सुदूरका गाउँहरूले ।
त्यसबेला ‘विकासको मूल’...
लोकतन्त्रमा कहाँ गए ति पंचायतकालिन सरकारी संरचना ?
मलाई याद छ जव देशमा पञ्चायती ब्यवस्था थियो, देशको राजनैतिक संरचना पनि त्यस्तै किसिमको थियो । देशको शासनमा सबै कुराको निर्णायक राजा थिए । ता पनि देशको दैनिक शासनको बागडोर सम्हाल्न जननिर्वाच...
मलाई याद छ जव देशमा पञ्चायती ब्यवस्था थियो, देशको राजनैतिक संरचना पनि त्यस्तै किसिमको थियो । देशको शासनमा सबै कुराको निर्णायक राजा थिए । ता पनि देशको दैनिक शासनको बागडोर सम्हाल्न जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री नै हुन्थे । प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरुका पनि आआप्mना कार्य क्षेत्र र बिभाग हुन्थे । त्यस्तै संरचना नगर, गाउँ, जिल्ला र अञ्चलमा पनि थिए । सबैले आआफनो दायित्वको काम गरेकै हुन्थे । त्यतिबेला राजनीति गर्नेहरुलाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण काम गरेर खाने नागरिकलाई...
क्यालेण्डरमा हेर्दा अझै पनि भारी बर्षा र अत्याधिक बर्षा देखाइरहेको छ । पछिल्लोपटक ढोरपाटनमा गएको बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भयो । अहिले पनि कैयौँ मानिसहरु बेपत्तामै छन् । यो बर्ष वास्त...
क्यालेण्डरमा हेर्दा अझै पनि भारी बर्षा र अत्याधिक बर्षा देखाइरहेको छ । पछिल्लोपटक ढोरपाटनमा गएको बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भयो । अहिले पनि कैयौँ मानिसहरु बेपत्तामै छन् । यो बर्ष वास्तवमा बाढी पहिरोको पीडा नेपाली जनताले निकै भोग्नुपर्यो । जमिनमा बसेको माटो, ढुंगा र लेदोको ठूलो भाग विचलन हुने र सामान्यतया ओरालो भागमा खस्ने प्रक्रियालाई पहिरो भनिन्छ । लगातार पर्ने वर्षाकाकारण ठाडो झुण्डिएको जमिन खस्ने, हिम पग्लिएर जमिनको भाग बगाउने, पानीको सतह बढ्ने, नदि तथा खोल...